Webzọ Ntube Ntanetị Dị Mkpa iji tinye na Weebụ Iwu Iwu Gị | Martech Zone
Tọzdee, Machị 21, 2019 Tọzdee, Machị 21, 2019 Bryan
Ahịa ahịa nke taa na-asọ asọmpi. N'ihi ya, nke a na-etinye ọtụtụ nrụgide nye ọtụtụ ndị ọka iwu na ụlọ ọrụ iwu ka ha pụọ ​​na asọmpi ndị ọzọ.
O siri ike ọ bụ ịgbalịsi ike inweta ọkachamara ọkachamara na ntanetị. Ọ bụrụ na saịtị gị anaghị amanye ndị ahịa, ndị ahịa na-aga n'ihu ndị asọmpi gị.
Ọ bụ ya mere, akara gị (nke ahụ gụnyere weebụsaịtị gị) kwesịrị ịmetụta azụmaahịa gị nke ukwuu, nyere gị aka ịchọta ndị ahịa ọhụụ, ma bulie ego gị.
Na post a, anyị ga-eji usoro aghụghọ websaịtị dị mkpa ị ga - eji jikọta gị na ụlọ ọrụ iwu gị:
Buru ụzọ mee atụmatụ tupu ihe ọ bụla ọzọ
Ebe nrụọrụ weebụ gị na-anọchite anya ụlọ ọrụ iwu gị, omume gị - gị ika.Mgbe ndị ọrụ weebụ gara na saịtị gị na nke mbụ ya, ha enweela echiche mbụ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eji ndebiri na-ezighi ezi ma saịtị gị dị ka ọtụtụ narị ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ịntanetị, mgbe ahụ ị ga - ada mba gị na ndị na - ege gị ntị inwe mmetụta pụrụ iche.
Kedu ihe kpatara onye ahịa ga - eji cheta gị ma ọ bụrụ na saịtị gị dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ha batara?
Ya mere, hazie ya. Lee ndụmọdụ ole na ole:
Nta bụ ihe ọzọ. Ejula weebụsaịtị gị na ederede na onyonyo. Kama nke ahụ, lekwasị anya na akụkụ ndị ga - eme ka ọdịnaya gị nwee ike ịgụ ma kwenye.
Ndị ọbịa nwere ike ịnwale ịnweta site na ekwentị mkpanaaka dị iche iche. Yabụ, zere ịgbakwunye atụmatụ dị mgbagwoju anya na ibe saịtị gị dị ka eserese ọkụ. Ọzọkwa, echekwala peeji gị n'ụzọ dabara naanị maka nha ihuenyo buru ibu.
Jide n'aka na ị nwere ọkachamara logo imewe. Gbaa mbọ hụ na ọ pụrụ iche; ma ọbụghị otu ahụ, ị ​​na-ekepụta echiche adịghị mma. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike ikpughe gị n'ihe egwu dị egwu.
Gbaa ule. Chọpụta ụdị ọdịnaya, agba, na bọtịnụ na-akwụ gị ụgwọ kachasị.
Mee ka ndị ọrụ gị kwenye na ha ga-eme ihe. Chee echiche banyere ihe ị chọrọ ka ndị ọrụ gị mee site na iji a ama ama-eme-maka.
Gbado anya na ọdịnaya gị
Ọ bụrụ na ị maghị ya, nyocha engines na saịtị dabere na njikọ na ogo ọdịnaya. Yabụ, ka ị na-ebipụta ọdịnaya ka ị na-ebipụta, ọ ga-abụrịrị ihe ịchọ mma ga-amasị ya.
Gbaa mbọ hụ na ị na-ebipụta ọdịnaya dị mma, nke na-akpali akpali, na nke dị elu. Ohere inweta bụ, ịnwe ọdịnaya dara ogbenye ga-eme ka onye ọbịa na saịtị hapụ saịtị gị.
Ọzọkwa, elelịla anya n’isepụta akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ. Ha nwere ike ime ọdịiche dị n’etiti onye ọbịa web na-agụ ọdịnaya gị niile ma ọ bụ ịhapụ saịtị gị.
Chee echiche banyere njem gị
Ikwesiri ịgbalịsi ike inweta webusaiti ị na - adị mfe. Gbaa mbọ hụ na ọ dịkwa na-anabata ụdị ngwaọrụ niile - site na smartphones, mbadamba, kọmputa desktọọpụ, wdg.
Ndị a bụ ihe ndị ọzọ ị ga-atụle iji hụ na ị wuo saịtị nke dị mfe iji:
Debe isi igodo site na njikọ ndị na-enweghị isi.
Hụ na ọdịnaya gị dị mfe ọgụgụ.
Belata ihe ndọpụ uche ndị ọzọ dị ka popups, animations, automatics ejije nke video na ndị ọzọ na multimedia ọdịnaya, na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị wulite saịtị nke na-akụda mmụọ ma sie ike iji, ị ga-ewepụ ndị ahịa gị. Iji jide n'aka na nke a anaghị eme gị, chọọ saịtị nke dị mfe nyocha.
Jiri Oyiyi Kpamkpam Na-adị Mgbe Niile
Mgbe ị na-agbakwunye onyonyo na saịtị gị, ịhọrọ foto foto nwere ike iyi nhọrọ dị mfe. Ma o nwere ihe ndọghachi azụ ya, kwa. Ohere inweta bụ, ndị a ka ndị otu narị otu narị (ma ọ bụrụ na ọ bụghị puku) nke ụlọ ọrụ iwu ndị ọzọ na-eji.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịpụpụ na ngwugwu ndị ọzọ, ịkwesịrị iji onyonyo dị elu dị oke ọnụ ahịa nke akara gị.
Yabụ, gịnị ma ị ga-egosi ụlọ ọrụ gị na ndị otu gị na onyonyo ndị a? Ọ humanizes gị ika, kwa.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịse foto nke ndị ọka iwu gị ma ọ bụ oghere ime ụlọ ọrụ gị. Ime nke a na-eme ka saịtị gị dị mma, na-adọrọ mmasị karị.
Tinye Akaebe Ndị Ahịa
Dabere na Amazelaw - Somefọdụ ndị mmadụ na-enyocha ụlọ ọrụ iwu na-adabere na ndụmọdụ na akaebe nke ndị ahịa ndị ọzọ. Ya mere atụla ụjọ iji ya mee ihe maka uru gị.
Nwere ike tinye akaebe na ebe obibi gị ma ọ bụ mepụta ibe dị iche na weebụsaịtị gị. Ọzọkwa, ị nwekwara ike ịpụta ndị a na profaịlụ ọka iwu gị.
Nwere weebụsaịtị SEO-Jikere
Ọ dị mkpa ka kachasị saịtị gị maka injin ọchụchọ ka ị wee na-erite uru nke okporo ụzọ.
Nke a bụ ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche ma a bịa SEO:
Zere nri isiokwu dị ka nke a nwere ike iduga a search engine dị ka Google penalizing gị na saịtị.
Na-eji ederede alt na aha kwesịrị ekwesị maka ihe oyiyi n'ihi na ọ na-enyere engines ọchụchọ aka ịghọta ọdịnaya gị nke ọma. Ọzọkwa, jiri usoro kwesịrị ekwesị maka ederede gị.
Kama iji "pịa ebe a" ma ọ bụ "pịa nke a" maka njikọ gị, jiri nkọwa ndị gbara ya gburugburu, ebe ọ na-eme ka ndị na-agụ ya ghọta ihe njikọ gị gbasara. Ọ na - enyere igwe nchọta aka aka ịmata ma ị na - ejikọ isi mmalite ndị dị mkpa ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọ dị mma, yabụ na ị nwere ya! Olileanya, ndụmọdụ ndị a ga-etinye gị n'ụzọ ziri ezi n'ịmepụta weebụsaịtị na ụlọ ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ iwu nke ga-eme ka ndị ọbịa weebụ gị bụrụ ndị ahịa ogologo oge.
Tags: ụlọ ọrụ iwuiwu ụlọ ọrụ weebụọka iwu weebụsaịtịmobile anabataAweb imewe
Bryan Mixon bụ onye nwe Iwu Amaze, ụlọ ọrụ weebụ maka ndị ọka iwu naanị na obere ụlọ ọrụ. Byran na-ewu weebụsaịtị kemgbe 1999 ma jiri afọ anọ gara aga nyere ụlọ ọrụ dị ka HubSpot, Mill33 na LivingSocial aka. Bryan maara nke ọma otu o si sie ike maka ndị nwe obere azụmaahịa iji nweta ahịa ahịa dijitalụ ha, yabụ o wuru AmazeLaw dị ka ebe dị mfe maka ndị ọka iwu na-ewu ewu iji wuo saịtị ha, chịkọta ndị ndu ma banye ụbọchị ha na-eme ihe gbasara ọkaiwu.
Klear Jikọọ: Influencer Marketing CRM na Ndepụta Mgbasa Ozi